Talo ku socota xirfadleyda - Tababbarka garashada
Halkan ayaad joogtaa: Bogga ugu weyn » Talo ku socota xirfadlayaasha
Laga soo bilaabo boggan waxaa suurtagal ah in laga codsado la-talin ka socota xirfad-yaqaan TrainingCognitive oo ku saabsan kiis caafimaad ama imtixaannada lagu qaadanayo qiimeynta. Waxaan kaa codsaneynaa inaad buuxiso foomka ku lifaaqan adoo dooranaya xirfadlaha aad rabto inaad weydiiso talo isla markaana si kooban u saadaaliso mawduuca codsiga. Waxaa lagaala soo xiriiri doonaa helitaankeena saacad ahaanta ah si loogu kulmo Skype ama Zoom. Qiimaha la-tashiga waa € 50 / saacaddii. Xaddiga ugu yar, in ka yar hal saac, waa 50 €.
Xirfadle lala xiriiri karo *
Dr. Anemone - Neuropsychologist (qiimeynta neuropsychological ee looga shakisan yahay ASD iyo / ama ADHD ee da'da koritaanka iyo qaangaarka, daaweynta neerfaha ee ASD iyo / ama ADHD iyo / ama garashada cillad dhimista ee isugeynta)
Dr. Donadio - Daaweeyaha hadalka (qiimeynta iyo daaweynta luuqada iyo cilladaha barashada)
Dr. Enrica Marrocco - Neurologistchologist (kormeerka qiimeynta iyo qaabeynta waxqabadyada garashada iyo maskaxda-bulshada ee gabowga caafimaadka iyo cudurada)
Sharax kooban oo ku saabsan mawduuca wadatashiga *